Luba Balaay Mokonnin: 'Ummanni Oromoo dhiifama gaafatamuu qaba' - BBC News Afaan Oromoo
Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa eenyummaafi Afaan Oromoo irratti dhiibbaa geessise jira jechuun Lubni Balaay Mokonniin ummanni Oromoo dhiifatama gaafatamuu qaba jedhan.
Dhihoo kana ammoo sadarkaa Naannoo Oromiyaatti Mana Lubummaa Ortodoksii hundeessuuf yaada akka qaban himaniiru.
Manni Lubummaa Ortodoksi Tawaahidoo Oromiyaa, Oromoonni Mana Kiristaanaa Ortodoksi Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti eenyummaan isaanii waan dhokateef isa ifa baasuuf hundessine jedhan turtii BBC waliin taasisaniin.
"Mana amantii kana keessaatti eenyummaa isaanii duudhaa isaanii of arguu waan dadhabaniif namoonni baayyeen mana amantaa kana gadhiisanii bahanii, manneen amantaa baayyeenis cufamaniiru Oromiyaa keessatti," jedhu.
Namni amantaa hordofu keessatti jalqaba eenyummaa ofii argee Waaqa ofiitis achiin argata kan jedhan luba Balaay, aadaafi duudhaa ofii qabatee ofta'uun waaqa amanuu qaba jedhan.
Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hanga ammaatti gama kanaan dadhabinaa agarsiisaa ture jechuun himatu.
"Keessattuu aadaafi duudhaa ummata Oromoo balaalefachuu malee kunuunsuu hin dandeenye. Inumaa kunuunsuun haa turuutii osoo balaalefachuu dhiiseeyyuu waan gaarii tokko ture," jedhu.
Mana Kiristaanaa kana keessaa sabni Oromoo kiyyaa miti jedhee keessaa bahaa kan tureefis sababa qaba jedhu.
"Amma warri biraa mana amantaa kana keessatti qacaramee mindeefamee jiraata. Oromoonni achi keessatti phaaphaasiifi qeesii ta'uun hin danda'amne," jechuun himu.
Waggoota 28 darbe kana keessattillee qabsoo ijibbaachisaa taasifameen phaaphaasonni Oromoo muraasni muudamuus himan.
Aadaafi duudhaa uummata Oromoo balaalefachuu malee kunuunsuu hin dandeenye
Balaay Mokonnin, Luba
Kanas ta'ee garuu qixa warra kaanii fudhatama argachaa hin turre jedhu.
Haqa manicha keessatti jallatee waggoota dheeraaf ture kanaan Oromoonni mana isaanii kana akka isaaniif ta'utti mijeefachuu osoo qabanii gadhiisanii deemuu akka hin qabaanneef jecha manni lubummaa kuni akka hundeeffamu eeran.
Gooftaa Iyyesuus gaafa bataskaana hundeessuu afaaniifi duudhaa ummataatiin hundeessuu kan himan Luba Balaay, bataskaanni keenya kana gochuu dhiisee aadaa kiyya, afaan kiyyan baradhu jedhame jedhan.
Manni Kiristaanaa Ortodoskii Itoophiyaa Paatiriyaarkii lamaan buluufi
Gaafa aadaa kee dhiisii kiyya fudhadhu, afaan kiyyaan baradhu jedhamu 'ayi kuni bataskaana keenyaa miti, ' jedhe ummanni Oromoo. Sirumaawuu,'' kan nafxanyaati jedhe," jedhan.
Bataskaana akka meeshaatti itti fayyadamaa turuufi amma siyaasarraa bilisa taanee yoo waan gaariin hojjetame jajnee yoo badiin umamu qeequuf hundeessuuf yaadne jedhan.
Mana Kiristaanaa Ortodoksii keessatti sanyummaan, naannummaan, tokko tuffatanii tokko olkaasuun baduu qaba jennee qabsoofna jedhan.
''Yoo isaan mirkaneessuu baatanis nuti karoora keenya itti fufna''
"Hojii gaarii amma jalqabne kanas uummanni amantiisaa jaalatu, gaggeesitoonnii mana amantichaa dhugaadhaaf dhaabbatanis nu deeggaraa jiru. Hojiin kuni nagaa buusa, amantoota biroo wajjinis nagaa uuma," jedhan.
Ammaaf kan hundeesine Mana Lubummaa Ortodoksii Oromiyaa waan ta'eef Qulqulluu Sinodoosiin Ortodooksii Itoophiyaa ammas keenyuma jedhan Luba Balaay.
Manni Lubummaa amma hundaa'uuf jedhu kuni sadarkaa Naannoo Oromiyaatti waan ta'eef akkuma federaalizimiitti kan caasefamu taha jedhan.
"Amma sinodoosii naannootii miti kan hundeessinu, Paatiriyaarkii naannootis hin muudnu. Phaaphaasonni Oromoo sinodoosii Itoophiyaa keessa jiru amma isaanis keenya.
Kan saba biraatis keenyuma. Rakkoo kan fidu yaada sirrii keenya kana nu fuuldura kan dhaabatan yoo ta'edha," jedhan.
Gaaffii hundeeffamaa kana akka milkaneessuuf Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaatiif gaaffii dhiheessuu kan himan Luba Balaay, yoo isaan mirkaneessuu baatanis nuti karoora keenya itti fufna jedhan.
Karoora jalqaban kan itti fufuuf seerri bataskaanaa barreefamee jiru akka isaan deeggarus himu.
"Seerri Fitaanagistii kan ajajutu jira, isa harkaa qabna. Ani barsiisaa Fitaanagistii, barsiisaa seeraa mana amantichaati. Seera ammayyaatis nan beeka. Seera bataskaanichaa namni hiikaa tures ana. Kanaafuu, seera bataskaanichaa takka osoo hin tuqiin mana kana hundeessina. Kaayyoon keenya bulchiinsasaa sirreessuu qofa," jedhan.
Waa'ee ogummaa Xalsam jedhamu hangam beektu?
Waa'ee eenyummaafi duudhaa Oromoo mana amantichaa keessatti dagatame yeroo gaafatamu ''yihew besimabelew mastemar yichal yelemwey'' jedhanii nuun falmu jedhu.
"Dura Afaan Amaaraan barsiifteet san booda 'kanin amma Amaariffaan jedhe sana jechuun Afaan Oromootin kana jechuudha' jedhii barsiisi siin jedhu. Kuni maalif barbaachisa. Hin amanamu jechuudha. Mana Waaqaa keessatti hunduu walqixa ta'uu qaba," jedhan.
Kaayyoo isaanii maali?
Waliigalattii bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa kan Itoophiyaa ta'uu hin dandeeye. Itoophiyaa jechuun Oromiyaadha saboota biroo hundasi jedhan.
Hundeeffamni Mana Lubummaa Ortodoksii Oromiyaa kuni manneen amantaa muraasa keessatti Afaan Oromootiin barsiifatamuu eegalameraa kaayyoo bal'aa qabachuus himu.
"Kaayyoon keenya Ooromoon mana amantaa kana keessatti of ilaaluu qabaadha. Aadaasaa, duudhaasaafi afaansaa dabalatee jechuudha. Kan amma duraa 'simaabelewudha," jedhan.
'Bataskaanni wanta akkanaa kana balaaleffachuu qabdi'
Gartummaa sanyiirratti hundaa'ee mana amantichaa keessa jira jedhan furuus dabalata mul'anni isaanii. Oromummaafi Kiristaanummaan walsimee deemuu qaba jedhan.
Dhimma taabota samiirraa bu'e jedhamuu irratti kan gaafanneefis, "Xaballi ni burqa isa kana namni itti fayyadamee fayyuu ni dandaha. Kuni dhugaadhasi. Taabota Waaqaa bu'u kana garuu ani itti hin amanu," jedhan.
Kaayyoon keenyas gochoota akkanaa sirreessudha. Wanti sobanii uuman kuni mana amntichaa diiga malee hin ulfeessus jedhan.
Mana Kiristaanaa Ortodoksi Tawaahidoo keessatti dhiibbaa aadaa, duudhaafi eenyummaa Oromoo irra gaheef Oromonni dhifama gaafatamuu qabus jedhu Luba Balaay.
...Taabota Waaqaa bu'u kana garuu ani itti hin amanu
Balaay Mokonniin, Luba
"Anarraa jalqabee, sirritti jilbeefatanii ummata Oromoo dhiifama gaafachuu qabu. Mana amantichaa keessa barruun tokko tokko gaarii kan hin taanetu jira. Waan ummanni Oromoo gaafate hunda godhaniifii Oromoo araarfachuu qaba Sinoodoosiin," jedhan.
Rakkoon kuni kan dhufe amanticharraa osoo hin taane gaggeesitoota amanticharraa waan ta'eef kana sirreessuuf akka hojjetanis himan.
Mana Lubummaa Ortodoksii Oromiyaa dhiheenya hundaa'uuf jedhu keessatti walitti qabummaadhaan tajaajilaa jiraachuufi luboonni, hayyoonni yunvarsiitiifi namoonni mana amantichaa keessa gulantaalee adda addaa irra jiran keessatti hirmaachuus Luba Balaay BBCtti himaniiru.
'Taabota Waaqarraa bu'e': 'Bataskaanni wanta akkanaa kana balaaleffachuu qabdi'
1 Elba 2019
Manni amantaa Ortodoskii Itoophiyaa Paatiriyaarkii lamaan buluufi
Waa'ee ogummaa waabeekaa Xalsam yeroo baay'ee falfala jedhamee waamamu hangam beektu?
17 Sadaasa 2017
18 Adooleessa 2018